Thwebula PlayStation 2.55.8 isizulu – Vessoft
Imidlalo, Ukungena kokukude
PlayStation – a software ukufinyelela izici network of the game aduduze kusukela Sony Corporation. PlayStation isebenzisa i-akhawunti yomsebenzisi ku ukuqinisekiswa ukuthi inikeza remote control phezu console bese ivumela ukulanda okuqukethwe ezihlukahlukene esitolo online. Program ikuvumela ukuba uhlole uhlu impumelelo, exchange of imiyalezo, uthole izindaba zakamuva nibuke trailer game. PlayStation futhi iqukethe module esenza ukuba babukele Gameplay of the imidlalo console kusukela service popular Twitch. PlayStation ikuvumela ukuba uhlele isaziso, usayizi wombhalo kanye izithombe imiphumela.
Control Remote of the izithombe imidlalo
Xoxa nabanye abasebenzisi
Usebentisa idivayisi njengoba screen lesibili console
Views izindaba trailer of imidlalo
Presence kwesigaba imiklomelo kanye impumelelo
Amazwana on PlayStation:
PlayStation Ahlobene software: